Filestage: သင်၏ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချောမွေ့စေသည် Martech Zone
Filestage - သင်၏ဗွီဒီယိုမှတ်တင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချောမွေ့စေသည်
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 21, 2015 တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 22, 2015 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကရှင်းပြချက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ သူသည်စွမ်းရည်အစုငါးခုကိုစုစည်းထားသော်လည်း၎င်းသည်ဖောက်သည်၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ သရုပ်ဖော်သူ၊ ကာတွန်းရုပ်ရှင်နှင့်အခွက်တဆယ်ကျော်အသံ။ သူများသည်ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများတွေအများကြီးပါ!
ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်လာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြတ်သန်းသွားသောအခါလုပ်ငန်းစဉ်အများစုကိုအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ပုဂ္ဂလိက, စကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားအကြား Vimeo ထုတ်ဝြေခင်း၊ အီးမေးလ်များနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းကိုaroundရာဝတီသို့တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နည်းစနစ်ပိုင်းအရပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လာမည့်ပရောဂျက်တွင် Filestage အတွက်စာရင်းသွင်းရုံသာပြုနိုင်သည်။ Filestage တစ်ခုဖြစ်သည် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုမှတ်စာနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် tool ကို။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားမီဒီယာအကြောင်းအရာကိုဝေမျှရန်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Filestage သည်ဗီဒီယိုများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ အပြင်အဆင်များ၊ သုံးစွဲသူ၏အချက်အလက်အားလုံးကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားသည်။
ဗွီဒီယိုမှသင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းပလက်ဖောင်းသည်တုံ့ပြန်မှုရှိပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အကောင်းဆုံးအနေနှင့်၊ frame အချိန်နှင့်အမှန်တကယ်တည်နေရာမြင်ကွင်းပေါ်ရှိနှစ်မျိုးလုံးတွင်ဗီဒီယိုများ annotation လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ Filestage သည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်မြင့်တက်လာသဖြင့်ယခုနှစ်ကုန်အထိအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။ sign up လုပ်ပါ။ (နားလည်ပါတယ်?)
နိုဝင်ဘာလ 29 ရက် 2017 ခုနှစ် ညနေ 10:59 နာရီ
ဒီအကြောင်းကို မင်းကိုပြောပြဖို့ ငါရေးတော့မယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းကြားဖူးပြီးသားလို့ ငါထင်ပါတယ်။ ငါဒါကိုသုံးနေတာ တစ်လလောက်ရှိပြီ၊ အရမ်းကောင်းတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။
30:2017 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 18